ထူးဆန်းထွေလာ – PwintsSan
ကမ္ဘာ့ အသက်ငယ်ဆုံး မိခင် (၁၀) ဦး
အခုတင်ပြမယ့် ကလေးမိခင် ၁၀ ဦးကတော အသက်အရွယ်နဲ့ သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ရဲ့အတိမ်အနက်ပေါ်မူတည်ပြီး အစဉ်လိုက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ 1. Leyla Mafi သူကတော့ အီရန်က အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ ။ အမေကို့ အစ်ကိုက ပိုက်ဆံပေးဖို့အတွက် သူ့အစ်ကိုတောင်းဆိုတာကို သူလက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့အမေက တော့ […]
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ အတက်လမ်း ကွန်ကရစ်အကွဲကြားမှာ ခေါင်းလေးထောင်ပီး မော်ဖူးနေတဲ့ အကောင်လေးကို တွေ့လား
ကျိုက်ထိုရွှေမြို့တော် ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ မရောက်ခင် အတက်လမ်းကွန်ကရစ်အကွဲကြားမှာ ခေါင်းလေးထောင်ပီး မော်ဖူးနေတဲ့ အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လား ဘာကြောင့် မိုးတွင်းဖက်တောင်ပိတ်တယ်ဆိုတာ သိပြီးမဟုတ်လား 😁 crd – Zaw Myo Lwin ကျိုက်​ထီးရိုး ဘုရားပွဲရာသီကသီတင်းကျွတ်​လပြည့်​​နေ့မှကဆုန်​လပြည့်​​နေ့အထိ၇ လတိတိ​တောင်​ ကျင်းပ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ဖွင့်​ပွဲ​နေ့နဲ့ပိတ်​ပွဲ​နေ့ကို အခန်းအနား နဲ့ကျင်းပပြီး အမိန့်​ပြန်​တမ်းထုတ်​ရပါတယ်​။ […]
May 17, 2018 twl 0
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ လယ်သမားများသည် နွားများ၏ အစာအိမ်တွင် ဘောလုံးအရွယ်ခန့် အပေါက်ဖောက်ထားလေ့ရှိသည်။ ထိုအပေါက်မှတဆင့် နွားများ၏ အစာကိုကြည့်နိုင်ပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်စရာမလိုတော့ဘဲ နွားများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယခုအခါ ဥရောပနှင့် အမေရိကန်ရှိ မွေးမြူရေးသမားများလည်း ထိုစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးလာကြသည်။ အုတ်စပါးနှင့် အခြားသီးနှံများကို အပေါက်မှ ထည့်ပေးပြီး နွားများ၏ […]
နယ်စပ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တစ်ခု။ ထိုစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ VIPခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ ထိုမြို့ရဲ့လူကုံထံစာရင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စက်လှေသူဌေး ကိုတိုးမင်းနဲ့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်။ တစ်မြို့ထဲသားချင်းတွေပေမယ့် အလုပ်ကိုယ်စီနှင့် မဆုံဖြစ်ကြသော သူတို့တွေ ဆုံတိုင်းဆုံခိုက်အချိန်လေးမှာတော့ စားရင်းသောက်ရင်း ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များပြောရင်းဖြင့် တဝါးဝါးတဟားဟားပွဲကျနေကြသည်။ ”ဟေ့ကောင်တိုးကြီး ဒီနေ့မင်းဒကာခံရမှာနော် ” ”ဟာ စိတ်သာချသူငယ်ချင်းမင်းတို့ ကြိုက်သလောက်သာဆွဲအေးဆေးပါကွ ငါကမင်းတို့အတွက် အထူးစပါယ်ရှယ်အမြည်းတစ်မျိုးတောင် စီစဉ်ထားတာနော် ” […]
ကမ္ဘာ့အတွင်းပိုင်း ဘယ်သူမှမတူးဖူးသည့်နေရာထိ ရောက်အောင်တူးမည်ဟုဆိုသော ဂျပန်
ကျနော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ကြက်သွန်နီလို အလွှာအထပ်ထပ်နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ဘောလုံးကြီးတစ်လုံးလိုပါပဲ။ မြေထုလွှာတွေရဲ့ အပေါ် (တနည်း) ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျနော်တို့ နေထိုင်ကြပြီး လေထု အလွှာတွေရဲ့အောက်မှာ သက်ရှိသတ္တဝါတွေ ရှင်သန်ကြပါတယ်။ လက်ရှိ တူးဖော်နေကြတဲ့ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဆိုတာ မြေပြင်မှ သိပ်မကွာဝေးလှတဲ့ နေရာကနေ ရရှိနေတဲ့ သဘာဝသယံဇာတ […]
ကျိုက်လတ်တမြို့လုံးနီးပါး အသုဘလိုက်ပို့ကြတော့ မြို့မျက်နာဖုံးလားလို့…
May 16, 2018 twl 0
ကျိုက်လတ်တမြို့လုံးနီးပါး အသုဘလိုက်ပို့ကြတော့ မြို့မျက်နာဖုံးလားလို့… ” နာရေးလိုက်ပို့သူ အများဆုံး ဖြစ်သဖြင့် ကွယ်လွန်သူသည် ကျိုက်လတ်မြို့မှ အာဏာရှိသူလားဆိုတော့ မဟုတ်။ ငွေကြေးချမ်းသာပြည့်စုံသည့် မျက်နှာကြီး အသိုင်းအဝိုင်း၊ မြို့မျက်နှာဖုံးလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်။ ထင် ပေါ်ကျော်ကြားသူ တစ်ဦးလား။ ဒါလည်းမမှန်သေး။ ကွယ်လွန်သူသည် ကျိုက်လတ်မြို့တွင်း လမ်းဘေးတွင်နေ၊ လမ်းဘေးတွင် […]
May 15, 2018 twl 0
သု့ရဲ့ အပေါက်ထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ မဲနေတာကြောင့် ကိုအောင်နိုင်တစ်ယောက် တွေသွားတယ်………. ကိုအောင်နိုင်တစ်ယောက် ညနေ ထမင်းစားတော့ မလို့ ကြောင်အိမ်လေးကို ဖွင့်ကြည့်တော့ မနက်က အမေချက်ထားတဲ့ ဟင်းက သိပ်မကျန်တော့တာ တွေ့ရတယ် အံမယ် သူ့အဖို့က ဟင်းမကျန်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး ညနေဘက်ဆိုရင် ကြက်ဥကို ခရမ်းချဉ်သီးလေး […]
ရေဖြူမြို့နယ်တွင် အရှည် ၁၈ ပေရှိသော အမည်မသိ ရေသတ္တဝါကြီးတစ်ကောင် တွေ့ရှိ
အခုတ​လော ထားဝယ်​ခရိုင်​ ​ရေဖြူမြိုနယ်​ ကလိန်​​အောင်​မြို့နယ်​ခွဲ ကံ​ပေါက်​​ဒေသ ဓမင်းဆိပ်​​ကျေးရွာ မှာ ဒီလိုငါး​တွေချည်းမိ​နေတယ်​ဗျ။ ဒီငါးက 13-5-2018 ရက်​​နေမှာ ရတဲ့ငါးပါ သုံး​ကောင်​​မြောက်​ဖြစ်​ပြီလို့သိရပါတယ်​။ အရှည်​က​တော့ ၁၈ ​ပေ ရှည်​ပါတယ်​။ ပင်​လယ်​​ရေလုပ်​သား​တွေ ကို ငါးအမည်​​မေးကြည့်​​တော့ တချို့ ၀ဇီ​ပျောက်​ ငမန်း​ပျောက်​ လို့လည်း​ပြောကြတယ်​ ​နောက်​တစ်​ချို့က […]
မြို.စားမင်းက သူ့ သမီး​တော်​ကို​ပေးခဲ့တဲ့ ဘီဒို’
မြို.စားမင်းက သူ့ သမီး​တော်​ကို​ပေးခဲ့တဲ့ ဘီဒို လွန်​ခဲ့တဲ့ ၁၄၈နှစ်​ က မြို့စားမင်း တပါးဟာ သူ၏ ချစ်​လှစွာ​သော သမီး​တော်​အတွက်​ ထူးခြား ​ကောင်းမွန်​​တဲ့ ဘီဒို တလုံးကို လက်​​ဆောင်​ ​ပေးခဲ့ ပါတယ်​။ ယခုအခါ ​ မြို့စားမင်းသည်​ ​ဒေါက်​တာလှဝင်း​အောင်​ ဖြစ်​လာ ပါတယ်​၊မြို့စားမင်းရဲ့ […]
ထူးထူးခြားခြား မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားက ဘိုးသက်ရှည်နဲ့ဘွားသက်ရှည်တို့၇ဦး
အခုလိုယနေ့ခေတ်မှာ သက်တမ်းစေ့ (သို့) သက်တမ်းကျော်လွန်ပြီး သက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်သူများရှားပါးလာပါတယ်။ သို့သော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ မောင်နှမ (၇) ဦးကတော့ ဒီထူးခြားတဲ့ဆုလဒ်နဲ့ပြည့်စုံပြီး ယနေ့အချိန်အထိ မောင်နှမအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြပါတယ်။ လေးဦးကတော့ မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့မှာနေထိုင်ပြီး ကျန်သုံးဦးကတော့ ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ထဲမှာ အကြီးဆုံးအဖွားခင်ကအသက် (၁၀၂)နှစ်ရှိပြီး အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဖွားထွေးကတော့ အသက် (၈၃) နှစ်ရှိပြီ […]